मोबाइललाई सिरानीमा राखेर सुत्दा के हुन्छ ? – Click Khabar
बिहिबार, पौष २२, २०७८ | १२:०७:१३ |
हामीमध्ये धेरैजसोले पक्कै पनि मोबाइल फोनलाई सिरानीमा राखेरै सुत्छौं। मोबाइललाई सिरानीमा राखेर सुत्दा के हुन्छ ? भन्ने हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। एक हप्तासम्म मोबाइललाई सिरानीबाट टाढा राखेर सुत्नुहोस् अनि आफैं हेर्नुहोस्, तपाईंमा कति परिवर्तन आउँछ।
तपाईंले विचार गर्नुभएकै होला, धेरै समय मोबाइलबाट कुरा गरिसकेपछि अलिअलि चक्कर लाग्ने, आलस्य हुने जस्तो भएको। त्यो मोबाइलको रेडिएसनले गर्दा हो। त्यत्ति नै समय हेडफोन प्रयोग गरेर या लाउड स्पिकरमा बोल्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्, तपाईंलाई पहिलेको जस्तो हुँदैन।
– मोबाइलबाट पहिलो म्यासेज नील पोप्वार्थले पठाएका थिए। जसमा लेखिएको थियो ‘म्यारी क्रिसमस’।